ဆိုဒီယမ်ကယ်လစီယမ်ကို double အယ်လကာလီ desulfurization deduster China Manufacturer
Desulphurization နှင့် Dedusting ပစ္စည်း,ဆိုဒီယမ်ကယ်လ်ဆီယမ်ကိုနှစ်ချက်အယ်လကာလီဖုန်ကောက်ခံရေး,နှစ်ချက်အယ်လကာလီ Deduster
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: Desulphurization နှင့် Dedusting ပစ္စည်း,ဆိုဒီယမ်ကယ်လ်ဆီယမ်ကိုနှစ်ချက်အယ်လကာလီဖုန်ကောက်ခံရေး,နှစ်ချက်အယ်လကာလီ Deduster
Home > ထုတ်ကုန်များ > လူပျိုစက်ဖုန်ကောက်ခံရေး > ဆိုဒီယမ်ကယ်လစီယမ်ကို double အယ်လကာလီ desulfurization deduster
 ဆိုဒီယမ်ကယ်လစီယမ်ကို double အယ်လကာလီ desulfurization deduster
ဆိုဒီယမ်ကယ်လစီယမ်ကို double အယ်လကာလီ desulphurization ဖြစ်စဉ်ကို အသုံးပြု. ဆိုဒီယမ်ကယ်လစီယမ်ကို double အယ်လကာလီ desulfurization deduster လုပ်ငန်းစဉ် (NaOH / Ca (OH) 2) ထုံးကျောက် / gypsum နည်းလမ်းနဲ့ဆိုဒီယမ်အယ်လကာလီနည်းလမ်း၏အခြေခံပေါ်မှာတီထွင်တဲ့နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလွယ်ကူသောအတိုင်းအတာနှင့်ထုံးကျောက် / gypsum နည်းလမ်းမြင့်မားစစ်ဆင်ရေးကုန်ကျစရိတ်နှင့်ဆိုဒီယမ်အယ်လကာလီနည်းလမ်းများ၏အားနည်းချက်ကိုကျော်လွှားတယ်။ ဒါဟာရေထဲမှာပျော်ဖို့ဆိုဒီယမ်ဆားကိုအသုံးပြုသည်နှင့် SO2, SO3, HCL, HF, NOX နှင့်ထိုကဲ့သို့သော PM2.5 အအဖြစ်စုပ်ယူရဲတိုက်ကိုအခြားအက်ဆစ်တ္ထုများအဖြစ်မျိုးစုံအစိတ်အပိုင်းများ၏များ၏ညှိနှိုင်းသန့်စင်စွမ်းရည်, ကိုစုပ်ယူမှဆိုဒီယမ်အယ်လကာလီကိုအသုံးပြုသည် မိုးသည်းထန်စွာသတ္တုနှင့်ဒိုင်အောက်ဆင်းပါဘဲ။ အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးဒေတာ desulphurization ၏စစ်ဆင်ရေးထိရောက်မှုအမြင့်ဆုံး 99% ကိုရောက်ရှိနိုင်သည်, ထက်ပို 95% ဖြစ်နိုင်သည်ကိုပြသသည် SO2 ထုတ်လွှတ်ထက်နည်းပေါင်း 100 မီလီဂရမ် / Nm3 (20mg / Nm3 ထက်လျော့နည်းနိမ့်ဆုံး) ဖြစ်ပါသည်, မြေမှုန့်ကိုထုတ်လွှတ်သည်ထက်နိမ့်ဖြစ်ပါတယ် 20mg / Nm3 နှင့်နိမ့်ဆုံးထက်နည်း 10 မီလီဂရမ် / Nm3 ဖြစ်ပြီး, ထိုကဲ့သို့သော SO3, HCL, HF, NOX, PM2.5 အ, လေးလံသောသတ္တုနှင့်ဒိုင်အောက်စင်အဖြစ်မျိုးစုံညစ်ညမ်းထိရောက်စွာဖယ်ရှားပစ်ပါသည်။ စုပ်ယူပြီးနောက် desulfurized အရည်အရှင်ဆိုဒီယမ်အိုင်းယွန်းစောင်ရေအောင်, အဓာတ်တိုးတင့်ကားအတွက်စျေးပေါထုံးကို အသုံးပြု. regenerated နှင့်စုပ်ယူအသုံးချနေသည်။
ဒီအဆိုဒီယမ်ကယ်လစီယမ်ကို double အယ်လကာလီ desulfurization deduster သည့်ထုံးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လွယ်ကူသောမှုကြီးလျှော့ချပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းဆိုဒီယမ်အယ်လကာလီနည်းလမ်းမြင့်မားစုပ်ယူထိရောက်မှု၏အားသာချက်များရှိပြီးသာရသောထုံးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဆိုဒီယမ်အယ်လကာလီနည်းလမ်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်။
ဆိုဒီယမ်ကယ်လစီယမ်ကို double အယ်လကာလီနည်းလမ်းနှင့်အတူ desulfurization duster များ၏စုပ်ယူမှုကိုမျှော်စင်ကောင်တာစီးဆင်းမှုမှုန်ရေမွှားမျှော်စင်အတွက်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါ flue ဓာတ်ငွေ့ဘေးထွက်ဝင်ပေါက်ကနေစုပ်ယူမျှော်စင်သို့ကြွလာပြီးလျှင်, မြင့်တက်ဧရိယာ၌ slurry တူမြူအတူကအဆက်အသွယ်။ ကုသမှုပြီးနောက် flue ဓာတ်ငွေ့မီးဖိုထဲဖို့ကိုစုပ်ယူမျှော်စင်ထိပ်ကနေဆေးရုံကဆင်းသည်။ ယင်းကိုစုပ်ယူအတွက်ရွေးချယ်ထားသည့်အဆိုပါပစ္စည်းများလုပ်ငန်းစဉ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြောင်းနှင့် flue ဓာတ်ငွေ့ပြာနှင့် desulfurization လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အစိုင်အခဲကိုဆိုင်းငံ့ကိစ္စ၏ wear နဲ့မျက်ရည်ယိုကိုဆီးတားနိုင်။ အဆိုပါစုပ်ယူမှုမျှော်စင် desulphurization ပစ္စည်းကိရိယာများ, အမည်ရမှုန်ရေမွှားစနစ်, အခိုးအငွေ့ပပျောက်ရေးနှင့် backwashing device ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ မျှော်စင်ပေါ်တွင် install manhole တံခါးများ, ရေပေးဝေရေးပိုက်လိုင်းများ, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပလက်ဖောင်းတက်လှေကားများအပြင်ရှိပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီမည်သည့်အရွယ်အစား desulphurizing တာဝါတိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
Flue ဓါတ်ငွေ့အအေးအေးဂျင့် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: Desulphurization နှင့် Dedusting ပစ္စည်း , ဆိုဒီယမ်ကယ်လ်ဆီယမ်ကိုနှစ်ချက်အယ်လကာလီဖုန်ကောက်ခံရေး , နှစ်ချက်အယ်လကာလီ Deduster , Desulphurization နှင့် Denitrification Valve , Desulphurization နှင့် Denitrification Deduster , filter Tube Dedusting ပစ္စည်း , စက်မှု Deodorizing ပစ္စည်း , ကာဗွန်အမှုန့် Mixing ပစ္စည်း